VANHU 6 VAKANAKA SKIERS WAUNOFANIRA KUTEVERA PAINSTAGRAM - ULLER
Enda zvakananga kune zviri mukati
slide pause Slide mutambo
30% EXTRA DISCOUNT - Cod: NAVIDAD
kutsvaka Akaunti 0 Cart
Isu tiri ani
Madhiresi makodhi, mari yekutumira uye mitero inowedzerwa panguva yekubuda.
Ngoro yako ikozvino isina chinhu.
IZVO Wedzera menyu
kudzidziswa / nhau /
Iwo 6 Akanakisa SKIERS WAUNOFANIRA KUTEVERA PAINSTAGRAM
Mbudzi 22, 2021
Kana iwe uchifarira zveskiing zvemukati pa Instagram sezvatiri, panguva ino takugadzirira iwe chinyorwa neakanakisa Instagram maakaundi evadhindo uye adrenaline vanoda muchando. Tichakuudza kuti account yega yega ndeyei uye nei usingafanire kupotsa zvese zvavanogovana; Ivo vanozogara vachikupa iwe kana rimwe zano rekuti urambe uchifunga, ingave kana iwe uchienda ku ski, shanyira chiteshi kana, wadii, kufemerwa uye uve nechimiro chakafanana mumifananidzo yako. Uchazvipotsa here?
1. MARKUS EDER (@ MARKUS1EDER)
KANA MUNHU AKATSAURIRA SHOKO REKUTI 'ZVAKAKATAMISA' ACHANGE ARI IYE
Markus Eder anoonekwa seakanakisa freerider munyika, uye kuratidza kuti ane vhidhiyo pane yake Instagram account kwaunogona kumuona achiita zvisingagoneke pa skis yake, kusvika apinda mubako rine stalactites nechando chakavhara musuwo mushure mekufamba kwake. ... kupenga! Zvinenge zvese zviri mukati mayo zvinorekodhwa kubva kune drone inokudzingirira iwe kuburikidza neakanyanya kudzika madzinza munyika. Mugwaro rake rekupedzisira rakanzi Kumhanya kwekupedzisira svetuka mukaha unosvika 60 metres uko kungoona zvinokutorera mweya wako. Mapfuti anongoshamisa. Iwe uchaona shure kwezviitiko uye zvese zvakamutora kuti awane zita rekuve mumwe weakanakisa munyika.
2. AYMAR NAVARRO (@AYMARNAVARRO)
THE BEST FREERIDER IN SPAIN
Iye weSpanish ane enviable Instagram account, maanoratidza akasiyana emukati. Mapikicha ake anoshamisa, uye mavari anogovana nevateveri vake mabasa ake makuru uye madzinza anoshamisa, akarekodhwa nekamera yekuita inoita kuti ufunge kuti ndiwe uri pakati pechiito. Unofungidzira here?
3. RESI STIEGLER (@RESISTIEGLER)
AKAUNTI YEMUKADZI ANODA
Kuve shasha yepasirese yealpine skiing, uyu wekuNorth America skier anosvika paavhareji yevateveri zviuru makumi matatu nenomwe pa Instagram account yake, maanogovera nguva dzake dzakanakisa mugomo rinotonhora iro rakamupa budiriro yehunyanzvi. Zvinoratidzawo maitiro ake seshasha yemukombe wepasi rose wekutsvedza kwemakomo, kufara kwaakaita kumba kwake kuHawaii uye nemifananidzo yemhando yepamusoro yakatorwa nemurume wake, anove nyanzvi yekutora mifananidzo. Pamusoro pekutsvedza, mutambi anodzidzirawo paddle surfing uye, kana mamiriro ekunze achibvumira, anokwira pabhodhi rake ndokuitumira. Anofarira zvemitambo uye kudya kwakanaka, uye masocial network ndiyo yake showcase kuti azviratidze sezvaanoita. Kutevera Resi inogara ichigamuchira matipi ezvekudya, hutano uye zvishoma kudzidziswa kwemitambo. Zvinokurudzira zvikuru, kunyanya kana iwe uri musikana anoyemura kusimba kwevazhinji vemitambo, sezvo kunyangwe hazvo Stiegler akakuvara zvisingaverengeki achi skiing, izvo hazvina kumumisa kubva mukutevera kukurumidza kwake kwemitambo uye kumupa zvinhu zvekunakidzwa uye kuramba. vateveri vake.
4. FELIX NEURETHER (@FELIX_NEUREUTHER)
Alpine skier, wekubva kuGerman uye nekukunda gumi nemaviri mumakombe epasi rose, ane imwe yemumhanyi Instagram inoitirwa shanje navose. Chokwadi! Munhoroondo yake iwe unogona kuwana zvese kubva kuhupenyu hwemhuri yake kune kubatana nevamwe vatambi. Muchokwadi, iwe unogona kutaura kuti Felix anokwesha mapendekete nevakuru. Muenzaniso weizvi ndewekuti ishamwari dzepedyo naNeuer, mutambi wenhabvu weGerman timu, waanogovana naye mazano ekushandiswa kwemakamera emitambo, maekisesaizi aunogona kuita kumba uye neapo neapo vhidhiyo yezviitiko zvake muchando. Pamusoro pesimba rake guru pamanetiweki, mutambi uyu akanyorawo bhuku rine musoro unoti Unsere Alpen, umo anorondedzera pfuma yose yechisikigo uye inokosha iyo Alps anayo, nzvimbo iyo yakamupawo kukunda kwake kukuru nezvinetso. Pasina mubvunzo, nzvimbo yaakaberekerwa. Chii chimwe, waizviziva here kuti amai vake ndiRose Mittermaier? Kana iwe usingamuzive, aivewo mutsiki uye akapa menduru kuGermany kuma80s.
5. AXEL LUND SVINDAL (@ASVINDAL)
CHINHU CHINHU CHENYIKA YEMITAMBO
Nekuunganidzwa kwemakumi matatu nembiri mukombe wepasi rose, mutsikidzi uyu ave mupesvedzeri wechokwadi munyika yemitambo kubvira paakatanga kugovera ruzivo rwake mukutora mifananidzo nekufamba pasirese. Kungofanana neakaunti yake bio inotaura, aimbofamba nyika mu spandex kuti akurumidze, asi iye zvino anoda kuziva nzira yekugara nekukurumidza pasina kuida. Zvakare, kana iwe uri mudiwa wemitambo yechando, iwe unoyeuka kuti muna 32 Porche yakagadzira hutachiona mufananidzo we skier panguva iyoyo Egon Zimmerman achisvetuka pa1963B. Mufananidzo uyu wakava mufananidzo, uye tichiongorora account yaAksel takaona kuti Porche afunga kumutsiridza mufananidzo iwoyo asi iye zvino aine Taycan, uyezve nemumhanyi ari kuita imwe yeakanakisa kusvetuka paskis yake. Nhoroondo yake ye Instagram izere nekufamba kwake kutenderera pasirese, uye ndiyo showcase iyo iyo Norwegian ikozvino yakazvipira kusimudzira mutambo semararamiro ane hutano kuburikidza nezvinyorwa zvine chekuita nerwendo rwake, uye kuti mutambo nematanho ayo anoshandurwa sei kuita hupenyu pachahwo. Kana iwe uchitsvaga nyaya dzekuvandudza uye kukurudzira, usapotsa yake Instagram mbiri. Zvinoshamisa!
6. LINDSEY VONN (@LINDSEYVONN)
IMWE YEVAKANAKA inomiririrwa ye FEMALE Sport
Mufananidzo waWolverine naLindsey paDeer Valley Resort muUtah wakatonyanya kupfuvura munhu anoda zvekushanya angade kuona: vese varikutsvedza, wekutanga ari iye akapa kirasi yehunyanzvi isinganzwisisike kune imwe yeakanakisa.Hollywood vatambi. Izvi zvinoita kuti tifunge kuti pamwe ndiye akakumbira Lindsay selfie uye kwete zvinopesana… ndiani anoziva! Mumhanyi weAlpine uyu aunganidza mikombe yepasi rose makumi masere nembiri uye menduru yeOlympic. Govera pane yako Instagram, kubva panguva dzako dzakanakisa pamateru eski, kuenda kuzororo rako kutenderera pasirese. Nhoroondo yake inosvika 82 miriyoni yevateveri, kuve mumwe weanomiririra nhamba dzeNorth America mutambo. Kutaura chokwadi, chikamu chemukurumbira wemukadzi uyu, kuwedzera kune tarenda rake, chakabatanidzwa nekuti ndiye aimbove shamwari yemumwe mutambi Tiger Woods. Mushure mokuparadzana kwavo, akabatanidzwa kune imwe nyaya inonyadzisa. Asi kunze kwekuda kuziva uku, mukwikwidzi weOlympic anoonekwa seakanakisa skier muUnited States: iye chete ndiye anoziva maitiro ekuita akanakisa emazino anokatyamadza mukondinendi yeAmerica.
Zvimwe zve: Vanhu
Snowdrift Nhema / Yero
Precio de deerta16500 € 165.00 € Precio tsika 22500 € 225.00 € Iwe unogona kuchengetedza € 60
Dutu Dzvuku / Bhuruu
Precio de deerta6900 € 69.00 € Precio tsika 12000 € 120.00 € Iwe unogona kuchengetedza € 51
Dutu Bhuruu / Yero
Dutu Nhema / Nyoro
Dutu Dema / Cherry
Dutu Nhema / Grey
Dutu White / Bhuruu
Avalanche Orange / Nhema
Precio de deerta9900 € 99.00 € Precio tsika 18500 € 185.00 € Iwe unogona kuchengetedza € 86
Avalanche Orange / Bhuruu
Aval Blue / Gray
Avalanche Nhema / Yero
Avalanche Muchena / Cherry
Avalanche White / Nhema
Cliff Bhuruu / Tsvuku
12000 € 120.00 €
Cliff Blue / Yero
Cliff Nhema / Nyoro
Chidzidzo chechando Vanopa
Titeverei paSocial Networks
Change KMF £
© 2021 ULLER All Rights Reserved